तत्काल नेप्से उकालो लाग्ने आधार छैन – Janacharcha.com
» आर्थिक » ब्यानर अंक: 4643
तत्काल नेप्से उकालो लाग्ने आधार छैन
चैत मसान्तपछि मात्र सेयर बजारमा सुधार आउने प्रक्षेपण
Janacharcha.com बुधबार, चैत्र ०२, २०७८ मा प्रकाशित
विराटनगर, चैत २
करिब डेढ महिनादेखि आरोलो लागिरहेको सेयर बजार बिच बिचमा उठ्न कोशिस गरेतापिन, फेरी ओरोला झर्ने क्रमले तिब्रता पाएको छ ।
विचमा एक्कासी नेप्से कसरी बढ्यो ?
गत बिहिबार एक्कासी नेप्से परिसूचक ५२ अंकले बढेर २५६६ पुग्यो । कारोबारको आर्को दिन आइतवार फेरी पनि नेप्से १०१ अंकले बढेर २६६७ पुग्यो ।
यसरी दुईदिनमा एक्कासी डेढ सय अंकले नेप्से बढ्दा लगानीकर्ताहरु आश्र्चयमा परेका छन् । तर यसमा आश्र्चय मान्नुपर्ने कुनै कुरा नभएको ख्याक लगानीकर्ताले बुझेका छन् । १०००, १५००, २००० र २५०० जस्तो अंकलाई अधिकांस लगानीकर्ताले कमन ट्राजेन्कजन पोईन्टको रुपमा राखेका हुन्छन् । समान्यता लगानीकर्ताहरुले यस्तो पोईन्टसम्म पुग्दा सेयर घटेको अवस्था छ भने किन्ने, अथवा बढेको छ भने बच्ने गर्दछन् । सोहीको सोईकोलोकिको कारण बिहिवार र आईतवार सेयर बढेको देखिन्छ ।
नेप्से लगालग घट्दै
त्यसपछि सोमबार मंगलबार र बुधबार नेप्से लगालग घटेको छ । बुधबार नेप्से घटेर २६३१ अंकमा झरेको छ ।
बजारमा पैशाको अभाव छ । बैंकहरु निक्षेपकर्तालाई धेरैभन्दा ब्याज दिन तयार छन् । निक्षेपकर्तालाई धेरै ब्याज दिएर, ऋणीसँग चर्को ब्याज लिने दाउमा छन् बैंकहरु । बैंकले ऋण ब्याजदर बढाएको विषयलाई लिएर देशका विभिन्न स्थानहरुमा व्यापारीहरु आन्दोलित समेत भईरहेको छन् ।
देशका नामुद वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रशितसम्म , फिनानन्सले १५ प्रतिशत र सहकारीले १८ प्रतिशतसम्म निक्षेपकर्तालाई ब्याज अफर गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तालाई सेयर मार्केटभन्दा बैंकमा पैशा निक्षेप गर्न फाईदा छ । बाठा लागनीकर्ताहरु अहिले आफुसँग भएको पैशा बैंकमा निक्षेप गरिरहेकारहेका छन् ।
कहिले सुध्रिएला सेयर बजार ?
स्थानीयतहको चुनाव नजिकिदै छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरेका नेताहरु अहिले मुठ्ठी कसेर बसेका छन् । उनीहरुसँग भएको पैसाँ रिलिज हुन अझै केही समय लाग्ने छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गतेलाई तोकिएको छ । टिकट फाईनल नभएसम्म उम्मिदवारहरुले पैशा झिक्नेवाला छैनन् । चुनावी प्रचार प्रसारले गतिलिन थालेसगै नेपाली बजारमा पैसा छरिन थाल्छ । अनी मात्र बजारमा पैशाको अभाव हराउँछ । तर नेताको ढिकुटी उघ्रन अझै चानचुन एक महिना जति लाग्छ र त्यतिन्जेल बजारमा पैशाको अभाव नै खड्किने छ ।
यो बेलासम्म सेयर मार्केट उकलो लाग्ने संभावना निकै न्युन छ । उकालो लागे पनि धेरै ठुलो अंकले बजार माथि जादैन । सेयर मार्केटका ठुला लगानीकर्ताहरु समेत अहिले ‘‘वेट एण्ड वाच” को अवस्थामा छन् । चुनावले सेयर बजारमा पार्ने असरका बुझेका ख्याक लगानीकर्ताहरुले दुई साता अघिनै अधिक्तम सेयर बेची उत्तानो परेर सुतिरहेका छन् ।
सेयरमा लगानी गर्न चाहनेहरुले यतिबेला चुप लागेर बस्ने समय हो । बैंकमा सर्ट टर्म डिपोजिट गर्नु अथवा साधारण सेभिङबाट ब्याज खादँै बस्नुनै अहिले सेयर लगानीकर्ताको लागी उपयुक्त देखिएको छ । करिब चैतको अन्तिमबाट मात्रै नेपाली सेयर बजारले गतिलिन सक्ने जनचर्चा डट कमको प्रक्षेपण छ ।